IHormone yokuKhula okuKhulayo kwiBangkok - iTransy HGH eThailand
I-hormone yokukhula komntu ekuchaseni kwangaphambili. Iziphumo zezilingo zeekliniki eThailand.
Kwi-1999, isizwe seSizwe Thayilendi ukuguga kuye kwapapashwa enye yezifundo zayo ezibalulekileyo ezichaphazelekayo ekusebenzeni ngonyango endaweni yokusetyenziswa kwehomoni yokukhula komntu (HGH). Injongo yale sifundo yayinjongo kwaye ayifuni nje ukuzama ukuqinisekisa ukwenziwa kwe-hormone yonyango yeHGH, kodwa ukuqhuba isifundo esifanelekileyo esiya kuphucula ulwazi lwezokwelapha oluhambelana nokusetyenziswa kweHGH ekugugeni. Abafundi abathathi-nxaxheba bahlulwe ngamaqela amabini. Iqela lokulinga lafumana ama-injection ye-HGH, ngelixa iqela lokulawula lafumana i-injection ye-placebo.
Uvavanyo lwe-HGH oluphinda kabini
Ukufundiswa ngokwemvelo kwakuyimpumpo emibini, oko kukuthi oogqirha okanye abagulane abayazi ukuba ngubani ofumene i-injection ye-HGH, kodwa ngubani owafaka i-placebo. Olu cwaningo luye lwaba ngumcimbi wesizwe oquka iikliniki ezivela kulo lonke elaseThailand. Ukuthatha inxaxheba kwizilingo, zombini izigulane kunye nezinye izibonakaliso zokuntuleka kwe-hormone yokukhula kwabantu. Iqela lezinto zokufunda zazibalulekileyo ngobukhulu kwaye zakwazi ukubonelela ngamanqanaba aphezulu okuthembeka ngokukwazi ukufumana imigangatho ephantsi yokubaluleka.
Injection HGH idibene nezinye iindlela zokonyango
Nangona esi sifundo sasizinikezele kakhulu kunyango olusetyenziswayo usebenzisa i-hormone yokukhula komntu, ukuba kuyimfuneko, izigulane nazo zanikwa i-testosterone, i-progesterone kunye ne-estrogen. Injongo yale sifundo yayingekho kuphela ukubonisa iingenelo ezinokwenzeka zokukhula komntu we-hormone kunye nezinye i-hormone, ezifana ne-testosterone, progesterone kunye ne-estrogen. Kwakukukhuthaza nokukhutshwa kwezilwanyana zeHGH.
Ukusetyenziswa kwe-HGH ebhengezwe ngumguli
UDkt. Thierry Hertoghe, wanyathelisa uphando lweklinikhi apho unyango oluthathelwa khona lweHGH hormone lunikezelwa kwizigulane ezinobunzima bokukhula komntu. Ezi zi gulane zinexesha elide kakhulu. Isigulane esona sisona sincinci sasineminyaka eyi-27 ubudala kunye nesigulo esidala kakhulu esingu-82. Ekuqaleni kweso sifundo, uDkt. Hertoghe kunye nabalingane bakhe babhala ngokugqithiseleyo imeko yezo zonke izigulane.
Emva kokuba babhale imeko yezempilo yezigulane zabo, benza i-hormone yeHGH hormone kwiinyanga ezimbini. UDkt. Hertoghe wafunyaniswa nezigulane zakhe waza wabacela ukuba bazalise uphando apho baphendule khona ngemiphumo yonyango basebenzisa i-questionnaire echaza ukuba yiziphi iingenelo ezifunyenwe kwiijokelelo ze-hormone yokukhula kwabantu. Oku kuluhlu lwazo zonke iimbuzo ze-questionnaire kunye neepesenti zezigulane ezithe zaphendulwa zibonisa ukuba imeko yazo iphuculwe.
Iimpawu zomzimba zeHGH kunye nokuguga
Inombolo eyancitshiweyo yobunzima ebusweni - 75,5%
Ukuphazamisa ngenye yeempawu ezibonakalayo zokuguga. Ikhumba liqala ukulahlekelwa ukuqina kunye nokuzaliseka kwayo kwaye lenziwe njengemizila yokukhanya kunye nemisipha ejulile. Uninzi lwezigulane eziye zazuza kwiingxube ze-hormone yokukhula komntu, zibonise ukuba i-HGH iye yanyusa imigca emihle okanye yabangela ukunyamalala kwemibimbi. Izigulane kunye ne-hormone yokukhula komntu ziyakwazi ukunyanzelela iiseli zesikhumba kunye nokuphucula amandla ebusweni bomzimba, zombini edlala indima ekudakaleni kwemibimbi.
Ikhumba elikhuni entanyeni kunye nobuso - 67%
Xa amadoda kunye nabasetyhini bebudala, izihlunu ziyancipha phantsi kwesikhumba, kubangela ukukhutshwa kwesikhumba kwi-muscle. Phantse ezimbini kwisithathu sezigulane zikaDkt. Hertoghe zabika ukuba ngenxa yonyango yokutshintshwa kwe-hormone yokukhula komntu uye wehlisa isikhumba esikhwameni nasebusweni. Izigulane zeHGH zakwazi ukwandisa ithoni ye-muscle yomzimba, eyaba yinzuzo yakhe.
Iimpawu ezinamandla ngakumbi 60.7%
Izigulane ezingaphezu kwesithandathu kwezilishumi ezibandakanyiweyo kwiDkt Hertoghe, zingangeenyanga ezimbini ze-injection zeHGH, ithoni ye-muscle ishintshile. I-hormone yokukhula komntu yakwazi ukwandisa, njengetoni ye-muscle, kunye nobukhulu bemisipha ngokutshintsha ukubonakala kwendlela yokubukeka kwemisipha kunye namandla abo. Ukuba izigulane zinamanqanaba aphilileyo ekukhuleni komntu, imisipha ifumana amandla amaninzi kunye nefuthe ngendlela yokukhula kwe-insulin efana ne-1, ejongene nempilo ye-muscle, ngokukodwa ngokudibeneyo kunye nokutya okuncedo kunye nokutya.
Umgangatho ophantsi weoli yomzimba - 48%
Phantse isiqingatha sezigulane ezithatha inxaxheba kule sifundo ngenxa yesiphumo HGH injections utshintshe isalathisi somzimba. I-hormone yokukhula komntu ibandakanya indima ebalulekileyo kwisimetabolism, esichaphazela kakhulu indlela iimisipha kunye neentlawulo zeoli zesilwanyana emzimbeni, kodwa ngokukodwa kwinqanaba eliphakathi. Isibindi siphenduka iHGH kwi-IGF-1, kwaye sinako ukuphuhla izicubu ezinamafutha angenakulungileyo kwaye ziguqule amandla angaphezulu!
Isikhumba esinamandla kakhulu, esinamandla kwi-34.5%
Abangaphezulu kwesithathu kwabaphenduli babone utshintsho olubalulekileyo kwithoni yesikhumba. Ezi zi gulane zenze utshintsho kwisakhiwo sesikhumba. Isiphumo kukuxhatshazwa kwemisipha kunye nokwanda kwee-cell hydration, kungekhona nje imibimbi kunye nekhanda eligudlayo lithemba ukunyamalala, kodwa ezi zinguqu zemizimba zenza igalelo lokunyanzelanisa kunye nenani lesikhumba. Amaseli ekhumba njengawo nawaphi na amaseli emzimbeni afuna umsebenzi ofanelekileyo wokuhambisa amanzi. Iiseli zesikhumba azifani. Ukwahlula kukuba ulusu luyilungu elihlala libonakaliswe kwingcinezelo yangaphandle, njengokukhanya kwelanga, ukushisa kunye nomoya. I-hormone yokukhula komntu inokukhusela isikhumba kwizinto kunye nokuthintela ukungcola kwamanzi, okwenza ulusu luhlale luhlala luqinile, luqine kwaye lunqande umonakalo.
Ukunyuka kweenwele eziphezulu - 28,1%
Ingaphezulu kwekota yezithathi-nxaxheba kulolu pho nonongo lwaye lwabona utshintsho kwizinwele zabo ngenxa yokuchazwa kwehomoni yokukhula komntu. Nangona esi siphumo siphumelele kakhulu, inxalenye ebalulekileyo yabathatha unyango lwe-HGH, jongana neenwele ezinempilo ngenxa yonyango. Xa iiseli zesikhumba zilungelelanisa ngokufanelekileyo kwaye zivuselele, iphinda ikhulise impilo yezinwele zezinwele. Iintlobo zezinwele zincinci nje yintsholongwane ekhutshweyo yelinqe ukwenzela ukuba impilo yengqondo nayo idlala indima ngqo kwimpilo yeenwele.
Ukusetyenziswa kwe-germanosilicate engqondweni kunye nefuthe le-hormone unyango, ukukhula kwabantu
Ukunyuka ngokubanzi kwimali engqondweni - 71,4%
Phantse kwikota yesithathu yezigulane zafumana uphuculo kwiimeko eziqhelekileyo zengqondo. Ukusilela kwe-hormone yokukhula komntu ixesha elide kukhokelela ekunciphiseni kwempilo yengqondo kwaye iziphumo zolu cwaningo zinika ubungqina obongezelelweyo bokuthi ukungabikho komnxeba wokukhula kwabantu kungonakalisa impilo yengqondo. Kwizigulane ezininzi, i-HGH iyakwazi ukwenza ubomi bemihla ngemihla bubekezeleleke kwaye buyoliseke. Oku kuyingcipheko ngenxa yokutshintshwa kwezinto ezibonakalayo ezivela kwiinguqu zenyama ezenzeka emzimbeni, kodwa i-HGH nayo iyakwazi ukuphucula i-chemistry ye-brain!
Amanqanaba okwandisa amandla - 86.8%
Phakathi kwezigulane ezithatha inxaxheba kwisifundo. U-Thierry, phantse i-9 kuzo zonke izigulane ze-10 zafumana amanqanaba okwandisa amandla. Uninzi lwezigulane ezinezifo, ukulahleka kwe-HGH kubonakalisa ukhathala. I-HGH inako ukuvuselela umzimba, kukunceda Uhlale uqaphile kwaye uzimisele ngakumbi ukuthatha usuku. I-hormone yokukhula komntu iyakwazi oku ngenxa yezizathu ezininzi. Esinye sezizathu kukuba iyakwandisa amandla omzimba ukuba abe namava ekuhlaziyweni ngenxa yokulala. Esinye isizathu kukuba ukungcola kwamafutha ezilwanyana, ngenxa ye-IGF-1, kunika umgangatho ophezulu wamandla kumgangatho weekhemikhali.
Ukwanda komzimba ophezulu - 86,04%
Ukongezelela ukuphakamisa amanqanaba ombane jikelele, i-hormone yokukhula komntu iyakwazi ukwandisa ikhono lomzimba lokusebenzela abo babandezeleka yi-hormone.
Ngaphezu kwe-85% yabaphenduli kwiimvavanyo zeclini. U-Thierry wabika ukuba ngenxa ye-injection ye-HGH iye yandisa amandla okwenza umsebenzi kunye nomsebenzi wenyama. I-hormone yokukhula komntu ibonakalisa amanqanaba okwanda kweemetabolism ezinika izihlunu zandisa amandla. Ukwandiswa kwamandla kuphucula amandla omzimba wokumelana namazinga okwanda okwenziwa ngokomzimba ukongeza ukwandiswa kokusetyenziswa kwalo msebenzi. Kwakhona, i-hormone yokwelapha i-HGH ikwandisa izinga apho umzimba uphila emva kokuzilolonga nokulimala. Ukuhlaziywa Umsebenzi okwandisiweyo ngexesha lokulala kuthetha ukuba Unokwenza usebenze nzima kwaye kaninzi ungakhathazeki.
Awukwazi ukulala emva kweemiphumo ezimbalwa ezibi - 82,5%
Ukuguqulwa kwamathambo ngokunyuka komntu ukuphucula i-hormone yokuphucula abantu kukuphucula amandla omzimba wokufumana ubuninzi bokulala kwakhe. I-HGH ifihliwe ngokuyinhloko ebusuku kwaye oku kwenzeka xa umzimba uphinda uphelelwe ukukhathala kunye nokugqoka, ukulila kuqokelelwe emini. Kwizigulane ezingenamsebenzi weHGH, umzimba awunakuthola izibonelelo ezipheleleyo zobuthongo obunempilo kwaye ekugqibeleni uyabuhlungu. Nangona eyona nto iluncedo kufuneka ibe nokulala ebusuku iiyure ezisibhozo, izigulane ezinezinga elifanelekileyo le-HGH, ukuba liyimfuneko, likwazi ukusebenza ngokuthe ngqo ngokulala okungaphantsi. Ukongezelela, izigulane ezinengxaki yokulala ngokulinganisela, i-HGH inokukunceda ukubuyisela impilo yokulala, ukubuyisela isingqimba sesimo somzimba.
Ukwandisa amandla okumelana noxinzelelo - 83,7%
Ukuxinezeleka ngenye yezinto ezibuhlungu kakhulu kwihlabathi lanamhlanje. Ukuxhalabisa nokuxinezeleka kunokuthintela yonke into ekuvuyiseni kukuziqonda, ukunyusa ingozi yokugula ngokomzimba, njengesifo senhliziyo, ukulala nokulala. Unokuba ngaphezu kwe-4 yezigulane ze-5 kulolu cwaningo kwinyanga enyanga ezimbini zonyango lwe-HGH zinciphisa amanqanaba oxinzelelo. Izigulane ezinokukhubazeka kwe-HGH zandise ukwandisa amazinga e-cortisol kunye nokunciphisa amanqanaba emandla, okwenza ukuba banomdla wokunyamezela.
Sincoma kwakhona ukuba ufunde:
HGH Thailand - funda ngakumbi malunga ne-hormone yokukhula eBangkok
Qala ukuthenga kwangoku!